Flight + hotely any Tenerife amin'ny vidiny 174 euro - Araraoty ity tolotra ity | Vaovao momba ny dia
Susana godoy | | tolotra, Flights
Tianay ny miantsena rehetra. Satria indraindray isika mahita tolotra tsara toa an'ity iray ity. mandeha sary mandeha any Tenerife ary mankafy mandritra ny telo andro tsy dia araka ny noeritreretinao azy. Mazava ho azy, ao amin'ny hotely kintana 4 sy karazana rendrarendra rehetra manodidina azy.
Hararaotintsika ny zava-misy fa tsy vanim-potoana lehibe intsony izao hahafahantsika manome ny tenantsika izay ilaintsika. Tenerife, amin'ny faran'ny volana septambra, dia mbola hamela antsika hankafy ny toetr'andro tsara, izay tsy mijanona raha tsy amin'ny volana Oktobra. Na izany aza, tsy afaka manadino tolotra toa izao izahay. Tsy mieritreritra ve ianao?
1 Flight + hotely any Tenerife
2 Inona no ho hita any amin'ny faritra avaratry Tenerife
2.2 Anaga Park
Flight + hotely any Tenerife
Ny dia lavitra mihoatra ny tonga lafatra. Ahitana a Ny sidina sy hotely any Tenerife dia 174 euro fotsiny. Avy any Madrid ny alahady 30 septambra ary ny fiverenana dia ny alarobia 3 oktobra. Eny, telo andro hankafizana tontolo iray fakan-tahaka. Hiara-dia amin'ny orinasa 'Air Europa' izahay.
Rehefa tonga any dia hijanona ao amin'ny hotely 'Spa La Quinta Park Suites'. Any avaratry Tenerife ity hotely ity. Tokony ho 5 kilometatra monja avy eo afovoany. Ny iray amin'ireo hatsarana lehibe dia ny fomba fijery mahafinaritra azontsika ankafizina avy amin'izany. Eo amin'ny hantsana misy fahitana tonga lafatra ny Oseana Atlantika no misy azy. Amin'izay fotoana izay dia afaka mahita an'i Puerto de la Cruz ihany koa ianao. Saingy tsy ny fomba fijery izay ho hankafizintsika mandritra ny telo andro ihany fa koa ny fampitaovana.
Ny dobo no iray amin'ireo manintona ny toerana. Misy koa a Toeram-pitsaboana, Spa ary hetsika isan-karazany azonao atao ny manakarama, toy ny fitsangatsanganana. Mazava ho azy fa tsy miditra amin'ny sarany izy ireo, fa mety ho safidy hafa izany. Tokony holazaina fa ho an'ny olona iray ihany ity tolotra ity. Manantena ny hatolotra ve ianao? Avy eo ianao dia afaka manao ny famandrihana ao Rumbo.es.
Inona no ho hita any amin'ny faritra avaratry Tenerife
Na dia mampiseho fahalianana be aza ny faritra rehetra ao aminy, ny faritra avaratra dia tsy lavitra eo aoriana. Satria manana ny trano fandraisam-bahiny akaiky dia akaiky isika, inona no fomba tsara kokoa noho ny mitsidika ny faritra nefa tsy mandeha lavitra. Voalohany, hankafy an'i Puerto de la Cruz izahay. Tanàna kely izy nefa tsara tarehy. Momba ny a tanàna fanjonoana miaraka amina seranana voatahiry tanteraka. Amin'ny fananana maripana mihoatra ny maripana mandritra ny taona dia nametraka ny toerany ho iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra izy. Mandehandeha mamaky ny afovoany manan-tantara ary mankafiza ny fivarotana azy ary koa ny trano fisakafoanana.
Manana enclave voajanahary tonga lafatra koa isika. Anaga Park dia toerana voaaro ao anatin'ny Anaga Massif. Izy io dia manana làlan-kizorana samihafa izay tena mahaliana ny mametraka làlana tsara. Raha tianao ny natiora amin'ny endriny madio sy ny karazana rehetra avelany anao, dia aza hadino ny mitsidika azy.
Na dia maro aza no mahalala azy amin'ny 'La Laguna' fotsiny. Io no tanàna faharoa misy mponina indrindra ao Tenerife ary eo avaratra atsinanan'ny nosy no misy azy. Tanàna voatondro ho World Heritage Site satria tanàna fanjanahan-tany tsy misy rindrina. Eto no ahitanao ny 'Diosezin'i Tenerife', 'Institute of Astrophysics' na ny seranam-piaramanidina amin'ity faritra avaratra ity. Ho an'ity rehetra ity sy ny maro hafa, dia raisina ho ivon-tsaina ao amin'ny Nosy Canary izy io.
Iray amin'ireo zoro ireo izay tsy azontsika adino. La Orotava no tanàna avo indrindra ao Espana fa koa amin'ny tsy fitoviana lehibe kokoa. Na ny arabe, na ny fiangonana, na ny zaridaina, na ny mausoleum, dia mahatonga azy io ho toerana tena atoro azy. Noho izany, ireo telo andro hiainanao any amin'ilay faritra dia azonao atao foana ny mijanona sy mamono ny hatsarany lehibe.
Kaominin'i Santa Cruz izy ary fantatra amin'ny fampiantranoana an'i Drago. Izy io dia iray amin'ireo marika lehibe an'io toerana io. Na dia eo aza izany, tsy azontsika atao ny tsy mahita ny ivony manan-tantara ary mandehandeha mamaky ny faritra ara-barotra misy azy Azonao atao koa ny miditra ao amin'ny Valan-javaboary Drago, izay mitentina 5 euro.
Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia natsangana ny toerana iray hafa tsy manam-paharoa ao avaratry Tenerife. Na dia tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo aza, noho ny fipoahan'ny volkano, dia nantsaka ny seranana. Izay nahatonga azy tsy dia zava-dehibe noho ny teo aloha. Na izany aza, afaka mankafy tontolo hafa manan-danja ianao ary mahita ny lapan'i San Miguel. Alfonso XIII dia nanome azy ny anaram-boninahitra tanàna sy seranan-tsambo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Flight + hotely any Tenerife mandritra ny 174 euro
Ny trano Anne Frank